Turkiga Oo Cadeeyay Mowqifkiisa Saldhiga Tababarada Military Ee Muqdisho – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Turkiga Oo Cadeeyay Mowqifkiisa Saldhiga Tababarada Military Ee Muqdisho
Agaasimaha guud ee wasaarada arimaha dibada dalka Turkiga uqaabilsan qaarada afirca Ahmet Riza oo wareysi siiyaya wakaalada wararka ee laga leeyahay dalka turkiga ee Anadol ayaa sheegay in waqtigan Soomaaliya aanan aheyn wadan tartan loogu jiro maadama haatan soomaaliya ay cagaheeda ku istaagtay.
Bayaanka kasoo baxay agaasimaha wasarada arimaha dibada dalkaasi Turkiga ayaa kusoo aadaya xili wadamo fara badan ay doonayaan in ay maal gashi xoogan kusameystaan guud ahaan Soomaaliya iyadoona dowladda turkiga ay kamid tahay dalalka maal gashiga xoogan kusamey sanaya guud ahaan Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyay.
Soomaaliya maahan wadan noogula tartami karo dalka soomaaliya waa dal inaga muhiimada weyn inoo leh waxaanu u aragnaa in loolan xoogan nagula jiro Soomaaliya marka loo eego maal gashiga iyo arimaha ganacsiga sidaad lasocotaan soomaaliya sanadihii ugu dambeeyay waxaanu kataageer nay arimo fara badan oo ay kamid thy saldhig weyn ay turkiga ku leedahay Somaaliya kaa oo ciidan fara badan loogu taba baro. ayaa lagu yiri warkan kasoo baxay dowladda turkiga.
Ciidamada dowlada soomaaliya ayaa tababaro waxaa ay ka helaan dalal dhowr ah oo ay kamid yihiin Mareykanka midowga Yurub iyo wadamo kale balse Turkiga waa uu kaduwan yahay qaabka ay ugarab istaagaan hadii ay noqon laheyd taageerada dhanka tababarka iyo xariirka dhanka ganacsiga ee nagala dhaxeeya Soomaaliya ayuu yiri agaasime Ahmet Riza.
Turkiga ayaa mudo sanada ah waxaa ay taageero mug leh usameen jireen dadka kunool guud ahaan Soomaaliya iyadoona mudooyin kii ugu dambeeyay xariirka diblomaasiyadeed ee udhaxeeya labadaasi dal uu ahaa mid wanagsan .